पार्टनर यौ’न क्रियामा कमजोर छन् भने लगाउनुहोस् यी काम ! – Annapurna Post News
May 12, 2022 sujaLeaveaComment on पार्टनर यौ’न क्रियामा कमजोर छन् भने लगाउनुहोस् यी काम !
आजको समयमा बिग्रँदै गएको आसीन जीवनशैली, गलत खाने बानी, तनाव, चिन्ता, प्रदूषण आदिका कारण यौ’न स्वास्थ्य प्राप्त गर्न निकै चुनौतीपूर्ण भएको छ । यी साना कारकहरूले यौ’न स्वास्थ्यमा धेरै नराम्रो प्रभाव पार्छ।
नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थले भर्खरै गरेको अनुसन्धानले मोटोपन भएका वा व्यायाम नगर्नेहरूमध्ये ४३ प्रतिशत महिला र ३१ प्रतिशत पुरुषहरू कुनै न कुनै यौ’न दु’र्ब’लताबाट ग्रस्त रहेको बताउँछ। अर्थात् शारीरिक रूपमा सक्रिय रहन नसक्ने मानिसको यौ’न स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । त्यसोभए यस्ता व्यक्तिहरूले भियाग्रा वा अन्य चक्कीहरू सेवन गर्छन्, जसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा साइड इफेक्ट हुन सक्छ।
शरीरलाई स्वस्थ राख्न, दिमागलाई स्वस्थ राख्न, रोगबाट टाढा रहन र राम्रो जीवन जिउनका लागि व्यायाम आवश्यक हुन्छ । यतिमात्र हैन यौ’न स्वास्थ्यलाई ठीक राख्न व्यायाम पनि निकै आवश्यक रहेको अनुसन्धानले बताएको छ । विज्ञहरूले पुरुष र महिला दुवैलाई शारीरिक गतिविधि वा कुनै पनि रूपमा व्यायाम गर्न सिफारिस गर्छन्। हप्ताको २–३ दिन कम्तिमा ३० मिनेट व्यायाम गर्ने मानिसले आफ्नो शरीरमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
के व्यायामले यौ’न स्वास्थ्यमा राम्रो असर गर्छ ? यसबारे अध्ययनले के भन्छ थाहा पाउनुहोस्।
द जर्नल अफ सेक्सुअल मेडिसिनमा प्रकाशित अध्ययनका अनुसार कम्मरको परिधि वा उच्च बीएमआई भएका पुरुषहरूमा इ’रे’क्टाइल डि’स’फं’क्शन हुने सम्भावना ५० प्रतिशत बढी हुन्छ। जबकि २५ प्रतिशत यस्ता महिलाहरूले यौ’न गतिविधि र कार्यसम्पादनमा कमी रहेको देखिन्छ ।
सन् २०२१ मा द जर्नल अफ से’क्सुअ’ल मेडिसिनमा प्रकाशित अनुसन्धानका अनुसार हरेक हप्ता कम्तिमा ६ घण्टा व्यायाम गर्ने महिलाले व्यायाम नगर्ने महिलाको तुलनामा यो’नी ध’म’नीमा कम दुखेको महसुस गरे। एकै समयमा, दैनिक व्यायाम गर्नेहरूले से’क्स, उ’त्ते’ज’ना, स्ने’ह’न र च’र’म सु’खको इ’च्छा महसुस गरे।
लस एन्जलसको सेडार्स–सिनाई मेडिकल सेन्टरका युरिन पङ्क्ति विशेषज्ञ र यौ’न स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. क्यारिन इल्बरले भने, यौ’न स्वास्थ्य साँच्चै ठूलो समस्या हो जसलाई सबैले स’मग्र स्वास्थ्य समस्याको रूपमा सामना गर्नुपर्छ। तर अझै पनि धेरैले यस विषयमा खुलेर बोल्न सकेका छैनन् ।
यो तथ्य हो कि यौ’न मानव जीवनको एक धेरै महत्त्वपूर्ण भाग हो र यसको महत्व केवल बच्चा जन्माउनमा सीमित छैन। राम्रोसँग गरिएको से’क्सले व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, जीवनको गुणस्तर र सम्बन्धलाई बलियो बनाउनको लागि लामो बाटो जान्छ।
कुनै पनि एरोबिक व्यायाम गर्नाले रक्तसञ्चार बढ्छ, जसले गर्दा रक्तसञ्चार प्रणाली स्वस्थ रहन्छ। राम्रो रक्तसञ्चार हुनुले पुरुषहरूमा इरेक्शनमा मद्दत गर्छ र महिलाहरूमा योनी स्नेहन र सनसनीमा मद्दत गर्दछ।
जब एक व्यक्ति नियमित रूपमा व्यायाम गर्दछ, उसको सहनशीलताको विकास हुन्छ, जुन उसको यौ’न स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक हुन्छ। नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थको एक अध्ययन अनुसार आधा घण्टाको यौन क्रियाकलापले पुरुषमा १२५ क्यालोरी र महिलामा करिब १०० क्यालोरी जलाउन सक्छ।
व्यायाम गर्दा, एक व्यक्तिले आहारको पालना गर्दछ, जसको कारण ऊ पहिले भन्दा धेरै फिट र अवशोषित हुन थाल्छ। यसो गर्दा उहाँमा आत्मविश्वास बढ्छ। जर्नल अफ पर्सनालिटीमा प्रकाशित २०१९ को अनुसन्धान अनुसार महिलाहरू आत्मविश्वासी व्यक्तिहरूलाई बढी रोमान्टिक र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बढी मन पराउँछन्। अब त्यो आत्मविश्वास सुरुदेखिको होस् वा उसले कुनै न कुनै रूपमा सिर्जना गरेको हो ।
यसबाहेक व्यायामले त’नाव कम गर्छ र तनाव, चिन्ता वा चिन्ताले यौन स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ भन्ने कुरामा तपाईलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ। व्यायामले तनाव, चिन्ता र डिप्रेसन कम गर्न धेरै मद्दत गर्छ, जसले राम्रो से’क्स ड्रा’इ’भमा मद्दत गर्दछ। यसका साथै व्यायामले रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्छ, मधुमेह जस्ता गम्भीर रोगबाट बचाउँछ र समग्र स्वास्थ्य पनि ठीक हुन्छ ।
कति व्यायाम सही छ ?
राम्रो यौ’न स्वास्थ्य प्राप्त गर्न कति व्यायाम गर्नुपर्छ, यो व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ। यसका लागि डाक्टरसँग पनि परामर्श लिन सकिन्छ । नियमित तीव्र गतिमा हिड्ने, ढिलो हिड्ने, एरोबिक व्यायाम, तौल प्रशिक्षण व्यायामले यौन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने विज्ञहरू बताउँछन् । कुनै पनि प्रकारको दैनिक २०–३० मिनेटको व्यायामले यौन स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्‍याउँछ।
शारीरिक रूपमा सक्रिय हुनुहोस् र आफ्नो आहार सही राख्नुहोस्। यसले तपाईंको यौ’न स्वास्थ्य ठीक राख्छ, जसले धेरै फाइदाहरू दिन्छ। तर यौ’न स्वास्थ्यमा कमी आएको महसुस भएमा सबैभन्दा पहिले डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, ताकि उनले सही जानकारी दिन सकून्।
२० वर्षपछि महिलाको शरिरमा आउँने ६ परिवर्तन
महिनावारीको समयमा अब मेन्स्ट्रुअल कपको प्रयोग गर्नुस, यस्ता छन् फाइदा र बेफाइदाहरु